သင့်ကလေးသည် လက်တို့စ် နို့သကြားနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း ပြဿနာ ရှိနေပါသလား? – Similac
Similac Gain IQ ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး HMO ဖော်မြူလာ
သင့်ကလေးသည် လက်တို့စ် နို့သကြားနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း ပြဿနာ ရှိနေပါသလား?
အစာချေဖျက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ပြဿနာများသည် သင့်ကလေးငယ်ကို မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြဿနာများ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပါက သင့်ကလေးခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များကို စုပ်ယူခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် ကြီးထွားခြင်းကိုပါ နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။ သင့်ကလေးငယ်က မကြာခဏလေတက်ခြင်း၊ လေပွလေထခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အစာမမြိုချနိုင်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသလား။ ဒီလက္ခဏာတွေဟာ (Lactose) လက်တို့စ် နို့သကြားနှင့် နဲ့ ဓာတ်မတည့်ခြင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း ဟုတ် မဟုတ်ကို သေချာအဖြေရှာပြီး မှန်ကန်တဲ့ ကုသမှုများ ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ ပုံမှန်စားနေကြ အစားအသောက်များမှ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) သောက်သုံးနေကြနို့မှ ကလေးအတွက်ဖော်စပ်စာ (ဥပမာ Similac Total Comfort)များ ပြောင်းလဲ တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးငယ်၏ ဓာတ်မတည့်ခြင်းပြဿနာများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ပါသည်။1, 2, 3, 4, 5
Lactose နှင့် Lactase
Lactase သည် အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး နို့ထွက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ နွားနို့၊ ဒိန်ခဲ၊ နို့မှရရှိသော အစားအစာများ၊ နို့ခဲ၊ အဆီမပါသော နို့မှုန့်) မှပါဝင်သော သကြားတစ်မျိုးဖြစ်သည့် Lactose ကိုဖြိုခွဲပေးသည်။ ကလေးများအပါအဝင် လူ၏ခန္ဓာကိုယ်များသည် Lactase ဓာတ်ကို အလုံအလောက် မထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါက နို့ပရိုတင်းများကို မဖြိုခွဲနိုင်ဘဲ Lactose မခံနိုင်ခြင်း ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Lactose သည် တိရစ္ဆာန်အများစု၏ နို့မှ ထုတ်လုပ်သော အစားအစာများဖြစ်သည့် ဒိန်ခဲ၊ ဒိန်ချဉ်၊ ပေါင်မုန့်၊ စီရီရယ်၊ ဒိန်ရည် နှင့် စည်သွပ်ဘူးများတွင် ပါဝင်တက်သော သကြားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ထို သကြားသည် အစားအစာအများစုတွင်ပါဝင်သည့်အတွက် သင့်ကလေးကြိုက်တတ်သော အစားအစာများတွင်လည်း ပါဝင်နေတတ်ပါသည်။ ထိုသကြားကို Lactase အင်ဇိုင်းသည် အူသိမ်အတွင်း ပိုမိုရှင်းလင်းသော ဂလူးကိုစ့်၊ ဂလက်တိုစ့်နှင့် အခြားဓာတ်များအဖြစ်ဖြိုခွဲပေးပြီး စုပ်ယူစေသည်။
ဓာတ်မတည့်ခြင်းလား (သို့ မဟုတ်) မခံနိုင်ခြင်းလား
ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့် မခံနိုင်ခြင်းတို့ နှစ်ခုတွင် အဓိကကွာခြားချက်မှာ ဓာတ်မတည့်ခြင်း၏ လက္ခဏာများသည် ချက်ချင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ ဓာတ်မတည့်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအားစနစ်သည် နို့မှ ပရိုတင်းနှင့် မကောင်းသော တုံ့ပြန့်မှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပြဿနာသည် anaphylaxis (အသက်ရှုကြပ် သတိလစ်ခြင်း) ကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကြီးမားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည်။ သင့်ကလေးငယ် သည် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ စားသောက်ပြီး အင်ပြင်များထခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာရောင်ယမ်းခြင်း၊ ယားယံခြင်းနှင့် အော့အန်ခြင်းများ ဖြစ်ပါက ဓာတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ Lactose မခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ရန် အတွက် အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန် ၂၄ နာရီအတွင်းဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ထို့အပြင် Lactose မခံနိုင်ခြင်းသည် သင့်ကလေးငယ် တွင် ငယ်စဉ်အချိန်မှာ မရှိသော်လည်း နှောင်တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ နို့ကို မခံနိုင်ခြင်းသည် အူအတွင်းမှ Lactase ဓာတ်များ လျော့ပါးလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ခံနိုင်စွမ်းနှင့် အစားအစာ စားသုံးမှုအဆင့်အပေါ်မူတည်ကာ ပြင်းထန်မှုလည်း ကွာခြားနိုင်သည်။ Lactose မခံနိုင်ခြင်း၏ လက္ခဏာများမှာ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ လေပွခြင်း (ဗိုက်ပူနေခြင်း)၊ လေချဉ်များတက်ခြင်း၊ ဝမ်းပျော့ခြင်းနှင့် ဝမ်းသွားခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ 2, 3
Lactose မခံနိုင်ခြင်း ကို ဂရုမပြုမိပါက သင့်ကလေးကို အစားကျွေးရန် ခက်ခဲလာတတ်ပြီး သင့်ကလေး၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ သင့်ကလေး၏ နေ့စဉ်အစားအသောက်များမှ မတည့်နိုင်သော အစားအစာများကို ဆန်းစစ်ပြီး မကျွေး ခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးငယ်ကို သက်သာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ လက္ခဏာများ သက်သာလာပါက ကလေးဆရာဝန်၏ အကူအညီဖြင့် ထိုအစားအစာများကို သင့်ကလေးကိုပြန်လည် ကျွေးကြည့်ခြင်းဖြင့် လက္ခဏာများ ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ်ြခင်းရှိမရှိ ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ သင့်ကလေးငယ်က နွားနို့နှင့် မတည့်သဖြင့် ပရိုတင်းနှင့် ကယ်လ်ဆီယမ်တို့ လုံလောက်စွာမရရှိမှာကို သင်စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုပါက စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ သင့်ကလေးသည် ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ကို အစိမ်းရောင်အရွက်များဖြစ်သည့် ဟင်းနှနွယ်ရွက်၊ ပန်းပွင့်စိမ်း၊ ကိုက်လံ၊ အစေ့အစံများ (ဗာဒံစေ့)၊ ပဲများ (ပဲကြီး)၊ ငါး (ဆာဒင်းငါး၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး) နှင့် ကယ်လ်ဆီယမ်ဖြည့်စွက် အချိုရည်များမှ ရရှိနိုင်သည်။ ပဲပိစပ်နှင့် ဗာဒံစေ့မှထုတ်လုပ်သော အစားအစာများသည်လည်း ပရိုတင်းကြွယ်ဝသောကြောင့် အသား နှင့် နို့အခြေပြုပရိုတင်းများအတွက် အစားထိုးနိုင်သည်။ 4, 5
သို့သော် ကလေးငယ်များသည် ပဲပိစပ်နှင့် ဗာဒံစေ့မှထုတ်လုပ်သော နို့အရသာများကို ကြိုက်လေ့မရှိကြပါ။ ထို့ကြောင့် မိဘများသည် အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေးအတွက် ပရီဘိုင်အိုတစ် ဖိုင်ဘာ နှင့် အခြားလိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်များ ပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးငယ်အတွက် သင့်တော်သည့် အစားထိုးနို့ ဖော်စပ်စာများကို ရှာဖွေဖို့လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Similac Total Comfort သည် Lactose မပါဝင်ဘဲ အစာခြေရလွယ်ကူသော ပရိုတိန်၊ ပရီဘိုင်အိုတစ်၊ ဗီတာမင်များ နှင့် ကလေးငယ်အစာခြေစနစ်ကို အကူအညီပေးနိုင်သည့် သတ္တုဓာတ်များပါဝင်ပြီး ဓာတ်မတည့်ခြင်းအန္တရာယ်များကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်သည်။ Similac Total Comfort Stage3၌ ပါဝင်သော TummiCare စနစ်တွင် ပရီဘိုင်အိုတစ် (အက်ဖ်အိုအက်စ်)၊ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြိုခွဲထား‌သော ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း နို့ဓမ်းရည်မှ ရသော ပရိုတင်း၊ လက်တို့စ် (ပါ၀င်မှု အလွန်နည်းပါးသော)၊ စားအုံးဆီ မပါ၀င်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရောအနှောတို့ ပါ၀င်သည်။
Similac Total Comfort Stage3သည် ၉၈% Lactose မပါဝင်ဘဲ အာဟာရဓာတ်များကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ စုပ်ယူနိုင်စေရန်နှင့် ဝမ်းသွားရလွယ်ကူစေရန်အတွက် အုန်းဆီကိုလည်း မထည့်သွင်းထားပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Similac Myanmar တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး သင့်ကလေးနှင့်တည့်မတည့်စမ်းသပ်ရန် နမူနာများလည်း တောင်းယူနိုင်ပါသည်။ 4, 5
Lasekan et al. (2017),
de Souza et al. (2017),
မိဘများအတွက် အရေးပါသည့် အဓိက အာဟာရဓာတ် (၃) မျိုး